Chondrichthyes: àgwà, ụdị na mmeputakwa | Green Renewables
na Chondrichthyes (Chondrichthyans), nke a na-akpọkwa azụ cartilaginous, bụ otu vertebrates mmiri ochie. Ọ bụ ezie na ha adịghị ọtụtụ ma ọ bụ dị iche iche dị ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ, ngbanwe ọdịdị ọdịdị ha, anụ ahụ igwu mmiri, akụkụ ahụ anụ ahụ, na àgwà anụ ahụ siri ike na agba na-egosi na e nyela ha ọnọdụ ebe obibi siri ike na gburugburu ebe obibi ha.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere Chondrichthyes, àgwà ha na bayoloji.
1 Isi njirimara nke Chondrichthyes
2 Igwu nke Chondrichthyes
Isi njirimara nke Chondrichthyes
Enwere ụdị azụ cartilaginous abụọ. Ọzọ, anyị ga-akọwa isi njirimara ya:
Shark na ụzarị ọkụ bụ nke otu anụmanụ a. Ụfọdụ n'ime ha bụ anụ anụ, ha na-achọta anụ ha na-eri site na akụkụ ahụ na-esi ísì ụtọ n'ihi ọdịdị ọdịdị ha na-adịghị mma. Ugbu a, enwere ihe karịrị ụdị shark 400 na iwu 8 na ihe dị ka ụdị ụzarị 500 na iwu 4. Banyere shark, ọtụtụ nwere njirimara ndị a:
Isi: Ahụ dị ka mkpịsị aka nwere ihu tụrụ atụ nke nwere afọ n'ihu. Ọdụ nke ahụ nwere ọdụ na-adịghị mma mechiri emechi, ya bụ, e nwere ụdị abụọ dị iche iche na usoro nke akwụkwọ, otu n'ime ha nwere njedebe nke ọkpụkpụ azụ, na n'ihu nke nwere otu ụzọ pectoral nku, otu ụzọ pelvic nku. , na azụ abụọ. fins dị iche. N'ime ụmụ nwoke, ọkpụkpụ pelvic ka agbanweburu dị ka akụkụ mmekọahụ maka ịmekọrịta ma na-akpọ ya glycoptera, pteropods, ma ọ bụ genus.
Ọhụụ, anụ ahụ na akụkụ ndị na-anabata ya: n'ihe gbasara ọnụ, ha nwere otu, ventral na ihu imi. Anya anaghị enwe mkpuchi, ọ bụ ezie na ụfọdụ ụdị nwere akpụkpọ anụ na-egbuke egbuke, nke nwere stoma n'azụ nkuchianaya ọ bụla. Akpụkpọ ahụ siri ike ma n'ụdị ụfọdụ yiri akwụkwọ aja, o nwere akpịrịkpa dị n'ụdị efere, nke a na-akpọkwa akpịrịkpa dermal, nke a na-ahazi n'ụzọ iji belata ọgbaghara na ihu azụ. Ha nwere neuromas n'ime ahụ ha na isi ha, bụ ndị na-anabata oke mmetụta maka ịma jijiji na iyi mmiri. Ha nwekwara ndị nnata pụrụ iche nwere ike ịchọpụta anụ oriri site na ọkụ eletrik ha na-ebupụta, ha bụ ọnya Lorenzini n'isi.
Ezé: Ezé anaghị ejikọta ya na agba dị ala, e nwere ahịrị abụọ, ahịrị ikpeazụ na-anọchi anya ezé efu na nke mbụ, ya mere ezé ọhụrụ nwere ike ịmalite mgbe niile. Dabere na ụdị dị iche iche, ndị a nwere ike inwe ọdịdị serrated iji belata nri, dị nkọ ma nwee ọrụ na-adọrọ adọrọ, n'ihe banyere ụdị nke eriri, ha nwere ezé dị larịị nke nwere ike ịcha n'elu.
Ọkpụkpụ na igwu mmiri: Ha nwere ọkpụkpụ cartilage na-emepụta ihe, ọ bụghị dị ka ọkpụkpụ dị ka azụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ha enweghị eriri afọ igwu mmiri, nke na-eme ka ha na-egwu mmiri mgbe niile ma ọ bụ nọrọ na ala, ma ọ bụghị na ha ga-emikpu. N'aka nke ọzọ, ha nwere nnukwu imeju, nke nwere lipids (squalene), nke na-egbochikwa ya imi.
N'ime Chondrichthyes anyị na-ahụ otu a nke gụnyere chimeras. Obere ìgwè a nwere ihe dị ka ụdị 47 taa. N'ihe anatomiki, ọ nwere ngwakọta nke elasmobranch na agwa azụ ọkpụkpụ:
Isi: Ha nwere ọdịdị dị nnọọ iche, ahụ ha elongated na isi ha protruding, ha nwere a kpochapụwo Ọdịdị nke nwere ike na-akwado ndị inyom n'oge mating. Imi ya dị ka oke bekee, ọdụ ya dịkwa ka ụtarị.
Nkịta na eze: Ha enweghị ezé, kama obosara, efere dị larịị. A na-ejikọta agba elu kpamkpam na okpokoro isi, n'adịghị ka ndị ọzọ, nke a bụ ebe aha ya si (holo = all, all and cephalo = head).
Size: Ha nwere ike iru mita 2 n'ogologo.
agbachitere: Ntụ azụ ya nwere ọkpụkpụ azụ na-egbu egbu.
Nri: Nri ha dabere na crustaceans, mollusks, echinoderms, obere azụ na algae, nke bụ ngwakọta nri ha na-egweri n'oge nri.
Igwu nke Chondrichthyes
Elasmobranchs nwere akpịrịkpa dermal, nke na-enye ha ohere ibelata ọgbaghara mgbe ha na-egwu mmiri. N'aka nke ọzọ, tinyere imeju ha bara ụbara lipid, ikike ha nwere ilo ikuku, na ntù ha, ha bụ ndị na-egwu mmiri mara mma na mgbanwe ndị a na-enye ha ohere ịnọ na mmiri. Ntụ dị iche iche nwere ike ime ka ị na-efegharị, na ọbụna ntù nwere ike ịchịkwa gị. N'aka nke ọzọ, nku azụ nwere ike ijikwa mkpali ma mepụta ike nkwusioru n'ihi ọdịdị ya na-adịghị ahụkebe.
Manta ụzarị na-emegharị ka ndụ n'okpuru mmiri, ahụ dị larịị, nwere ntù otu na-agbasa ma jikọta ya na isi, na-eme ka nku mgbe a na-egwu mmiri. Ezé ha dị larịị, nwee ike ịchacha elu na ịcha nri, nke na-abụkarị crustaceans, mollusks na obere azụ.
Ọdụ ha dị ka ụtarị, nwere otu ma ọ bụ karịa spines na njedebe, nke jikọtara ya na gland na-egbu egbu nke ụdị ụfọdụ. Ha nwekwara akụkụ eletrik n'akụkụ abụọ nke isi ha, nke nwere ike ime ka ọkụ eletrik mebie anụ anụ ma ọ bụ anụ ha.
Azụ cartilaginous nwere fatịlaịza n'ime yana usoro ọmụmụ dị iche iche anyị ga-ahụ n'okpuru:
Oviparous: Ha na-edina akwa nkochi ime akwa ozugbo fatịlaịza gachara. Ọtụtụ shark na ụzarị ọkụ na-atọgbọ àkwá ha n'ime akpa keratinous. Tendril dị ka filaments na-etolite na njedebe nke sac, nke a na-eji na-agbaso ihe mbụ siri ike ha na-emetụ. Embrayo nwere ike ịmalite n'ime ọnwa isii ruo afọ abụọ. Ọtụtụ mgbe, ụkpụrụ a na-apụta na obere ụdị benthic, nke nwere ike itinye akwa 6.
Viviparous: Ha ga-etolite ezigbo placenta nke ẹmbrayo ga-esi na ya rie. Ụdị mmeputakwa a kwalitere ọganihu evolushọn ha na otu a. Ọ na-apụta n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% nke azụ cartilaginous na nnukwu ụdị na-arụ ọrụ.
Oviviparous: ha na-edobe ẹmbrayo na tube fallopian n'oge mmepe embrayo na-eri nri na nkochi ime akwa ya ruo mgbe amuru ya. N'aka nke ya, ọ na-enye embrayo ụdị nri dị iche iche, dị ka lecithin, ebe ẹmbrayo na-eri nkochi ime akwa; nri anụ ahụ, ebe otu ma ọ bụ karịa embrayo na-eri nri site na mmiri mmiri (nri anụ ahụ) nke villi na-emepụta n'elu ime akpanwa. N'aka nke ọzọ, e nwere ovules, ya bụ, embrayo na-eri nri na àkwá fatịlaịza mgbe ha nọ n'akpa nwa. N'ikpeazụ, e nwere oleanders ma ọ bụ anụ anụ n'akpa nwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere Chondrichthyes na àgwà ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Chondrichthyes